International Tourism Inosvika muAfrica uye Middle East
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » | » International Tourism Inosvika muAfrica uye Middle East
| • African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Saudis vafambi vakuru
Nyanzvi dzekufamba analytics dzanga dzichinyatso tarisisa mhepo dzekuchinja muchikamu chekufamba kubva denda raburitswa, uye kusvika nguva pfupi yadarika, data retikiti remhepo rairatidza maAmerica, kunyanya Caribbean, sevari voga vanochinja mutambo kana zvasvika panguva chaiyo. kufamba kupora. Nekudaro, data razvino rekufamba rinoratidza kuti Africa neMiddle East dziri kuratidzawo kuve dzakasimba zvakanyanya.
Nepo huwandu hwese hwepasi rose hwakapinda kune vanosvika kune dzimwe nyika kubva muna Gumiguru 2021 huri pa -77%, kuAfrica neMiddle East nhamba iyi iri pa - 68%. Uyezve, iSub-Saharan Africa iri kuratidza kuita kwakanakisa kwegore-kusvika-zuva.
Tichitarisa kusvika kwaSeptember-Gumiguru, 71% yevafambi vaiuya kunharaunda iyi vaibva kuMiddle East kuenda. Nepo kuNorth Africa, Kushanya Shamwari & Hama vafambi vanotora 46%, uye Sub-Saharan Africa inotora 33%. KuMiddle East ingori 18%, zvichiratidza kuti kufamba kuno kunonyanya kuitirwa Kutandara.
Munguva yedenda iri, nyika dzepamusoro dzaifamba munzvimbo iyi dzaive: Saudis. Izvi zvakazoteverwa neEmiratis neQataris.
Kana tichienzaniswa nemamwe matunhu ematunhu matatu epamusoro nyika dzese dzakange dziine mwero wekudzivirira wepamusoro, kubatana nendege, uye mamiriro ekufamba ari nyore kana achienzaniswa nekutaura, South Africa, iyo yaitambudzwa nemhosva nyowani dzeCovid uye mitemo yakasimba yekuvhara.
Tichitarisa muDubai, mutambi mukuru mukubhururuka nendege uye kufamba-refu, data retikiti remhepo rinoratidza kuti nhamba dzekusvika dzakaderera ne64% kubva munaNovember 2021 - Kubvumbi 2022, kazhinji mwaka wepamusoro wekufamba kune dzimwe nyika kutandara.
Padivi pefiripi, kwave nekukura kwakakura kwekufamba kubva kuEgypt kuenda kuDubai uye US On-The-Bhuku (OTB) nhamba dzekufamba dzakaderera ne13% chete zvichienzaniswa nenguva dzisati dzatanga denda. Zvakare, gore-kusvika-date kureba kwekugara kwakapetwa kaviri, kwakawedzera kubva pamazuva manomwe kusvika kumazuva gumi nemana pakubhukidza.
Imwe nhau yakanaka yekucherekedza ndeyekuti kufamba kwebhizinesi kuenda kuUAE kuri munzira yakanaka yekupora, kusvika 75% muvhiki kutanga 21 Gumiguru zvichienzaniswa ne2019, inotsigirwa nezviitiko zvehupenyu seDubai Expo.
Vanoenderera mberi vachiti: “Munguva imwe chete iyi yePremium cabin classes kufamba kwakawana chikamu che7% chemusika kana zvichienzaniswa ne2019. Vanhu vasina kuroora kana kuroorwa ndivo vari kufamba zvakanyanya mudunhu rino. Mushure mekuvhurwa kweDubai Expo muna Gumiguru, kuenda kuUAE kwakawedzera uye kwaingova 35% kuseri kwemazinga a2019 - zvinhu zviri kufamba nenzira kwayo kuDubai nedunhu rose.